Bayfield Fruit Loop Retreat -2 Cottages
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguChris & Jenny
Wamkelekile kwiBayfield Fruit Loop Retreat! Inezindlu ezimbini ezisanda kulungiswa ngokutsha, ezinemixholo emva kweBayfield kunye neZiqithi zePostile, ezibekwe kwiihektare ezi-7 zamaplanga abucala eBayfield, WI. Ipropathi ikuvumela ukuba ukonwabele amava anoxolo kwaye azolile eNorthwoods kodwa usenemizuzu ukusuka kwiindawo ezininzi ezinomtsalane kunye nedolophu yaseBayfield.
Le ndawo ifumaneka ngokulula nje ngemizuzu emi-5 yokuqhuba okanye iikhilomitha ezi-2.5 ukusuka kumbindi wedolophu yaseBayfield. Ibekwe kanye kwilizwe i-Hwy J, indawo yokuqala yokhenketho oluzikhokelayo olujikeleze isixeko saseBayfield apho kuphononongwa inkcubeko yokutya yasekhaya kuqala kwiigadi zeziqhamo zosapho ezininzi, iifama zeziqhamo, kunye neendawo zokuthengisa iwayini, ezibizwa ngokuba yiBayfield fruit loop, kunye nemvelaphi. yegama lepropati yethu. I-County Hwy J kanye ngaphandle kwendlela yethu yokuqhuba ikwavumela ukufikelela kwi-ATV kunye neemoto zekhephu ukuya kwiindlela ezininzi zasekhaya kunye neendlela ezingqongileyo.
Ipropathi inezindlu ezi-2 i-Main Cottage yabucala kwelinye icala le-driveway kunye ne-cottage yesibini, i-"Rock Garden Cottage", kwelinye icala lendlela yokuqhuba malunga ne-100ft ngaphandle isenza le ndawo ikhethekileyo.
I-Main Cottage, enewaka le-square leenyawo ezizodwa zokuvala umngangatho kunye nesidlo sangaphandle ngaphambili. Igumbi lokulala likakumkanikazi lineengcango zaseFransi ezikuzisa kumgangatho ongasemva kwizitulo ezibini zokuphumla ezingaphandle, zilungele ukuphumla kwaye ube nekomityi yekofu yasekuseni ngelixa ilanga lasekuseni liphuma.
Igumbi lokuhlala lineefestile ezimbini ezinkulu ezibonisa i-panoramic ezikujikelezileyo, zikunika iimbono ze-Northwoods kunye nezilwanyana zasendle (iifestile ezibonisa ukukhanya zithetha ukuba unokubona ngaphandle, kodwa izilwanyana zasendle aziboni!)
I-cottage enkulu inekhitshi epheleleyo kunye negumbi lokuhlambela elinesibhakabhaka kunye nefeni yobushushu, iisilingi ezigudisiweyo kuyo yonke i-cottage inika ukukhanya kwendalo okuninzi. Upholile ecaleni kwendawo yomlilo yepropane / isitovu kwigumbi lokuhlala ngelixa usonwabela iimbono ezenziwe ngamaplanga.
I-Rock Garden Cottage yethu iqala ngokujonga isitiya sethu samatye njengoko uqhuba, igadi entle ehlala ixesha elide, kunye negumbi lomlilo langaphandle elingqongwe ziitshiphusi zomsedare kunye neetotshi zetiki ezikhanyiswe ngelanga.
Xa ungena kwi-cottage enamanqanaba ama-2 igumbi lokulala elikumgangatho ophambili lineebhedi ezimbini zokumkanikazi ezilala kamnandi ezine. Ukunyuka kwezitephusi inqanaba le-2 libonelela ngohambo olukhulu kwigunjana, igumbi lokuhlambela eliphangaleleyo elineekhawuntara zegranite, ishawari enkulu yebhastile yokuhamba ngebhastile yaseItali enezindlu zangasese zokuthotyelwa, ifeni yobushushu kunye nethawula efudumeleyo, okumnandi kwiinyanga ezipholileyo. Iifestile ezimbini zibonisa umbono ojongene negadi yamatye.
Kwelinye isiqingatha somgangatho we-2 kukho ikhitshi elivulekileyo elivulekileyo- igumbi lokuhlala elinesilingi eziphezulu, indawo yomlilo yombane egqibeleleyo ukuze ukhululeke phambi kwayo, i-futon eguqulela ezantsi ukwenza ibhedi epheleleyo, kunye nefestile enkulu ye-3 yefestile yehlathi. izisa ukukhanya kwendalo okuninzi.
I-Newley ihlaziywe kwaye ihlaziywa ngempahla emitsha, ubushushu obuphakathi / i-AC, izinto zangasese ezincomekayo, iSatellite starlink ye-intanethi ye-intanethi ye-Wi Fi (50-150mb) inika uxhulumaniso olukhawulezayo kunye nokufikelela kwi-Tv kunye ne-Netflix ekhoyo.
Iinkcukacha ze-Cottage eziPhambili kunye neNgcaciso: 1BR 1BA
-Ilala 3-4, i-queen bed e-1 kwigumbi lokulala, i-1 sofa yokulala egcweleyo w/i-memory foam mattress topper
-1,000sq ft ukusonga ngeenxa zonke kwidesika
-Itafile yokutyela yangaphandle yabantu aba-6 kunye nezitulo ezi-2 ezijikelezayo zangaphandle ezingaphandle kweengcango zokulala zaseFransi (ngexesha lonyaka kaMeyi-Novemba)
-Iingcango zaseFransi ezinezikrini zepokotho ngaphandle kwegumbi lokulala ukuya kwidesika
-Izipili eziphindwe kabini zePanoramic ezibonisa iifestile kwigumbi lokuhlala
-Izibane zesibhakabhaka kunye neesilingi eziphakamileyo zivumela ukukhanya okuninzi kwendalo
-Isitovu sepropane / indawo yomlilo ukufudumala kwaye upholile ecaleni
-IRoku Tv ebandakanya iNetflix
-Iwotshi ye-alam yegumbi lokulala kunye nokutshaja okungenazingcingo / itshaja engenazingcingo
-Iintlobo ngeentlobo zokuqina kwemiqamelo, iiseti zamaphepha athambileyo aphezulu, oomatrasi abampunga
-Hamilton Beach ikomityi enye okanye umenzi wekofu yembiza kunye nomgangatho okhululekileyo okhululekileyo wencasa yamandla / ikofu ye-decaf / iswekile / iti / i-creamer eyomileyo
-Ikhitshi eligcweleyo (iziqholo, ioyile, i-tinfoil, isaran wrap, iimbiza/iipani, izitya/iipleyiti/iikomityi ukuya kuthi ga kwi-10- ubukhulu bepropathi yethu)
-Izongeziweyo - i-emele yomkhenkce, i-champagne / iiglasi zewayini ezine-stemless kunye ne-stemless / iiglasi zebhiya / izitya zokubamba / iipleyiti
-Electric flat zokupheka igrile , 4 isilayi setoaster
-4 itafile yomntu igqabi lebhabhathane lingaphuma liyenze itafile yabantu aba-6 (izitulo ezi-2 ezongezelelweyo ezisongwayo kwigunjana)
I-Rock Garden Cottage Iinkcukacha kunye neNgcaciso: 1BR 1BA
-Ilala 6, iibhedi ezi-2 zokumkanikazi kwigumbi lokulala elisezantsi, indawo yokulala yeFuton kumgangatho wesibini
-Izinyuko ukuya kwinqanaba le-2 ekhitshini, igumbi lokuhlala, ukuhamba kwi-closet, igumbi lokuhlambela
-Igumbi lokuhlambela elibanzi elineshawari yebhastile yaseItali
-Uphahla oluphezulu / isilingi fan kwigumbi lokuhlala
-Imibono yeenkuni / isitiya samatye kunye nendawo yokubeka umlilo kwiifestile
-Ikhitshi eligcweleyo elinendawo yokupheka yombane (akukho oveni)
-IHamilton Beach ikomityi enye okanye umenzi wekofu yembiza
-Ikofu encomekayo/iti/iswekile/isikhrimu esomileyo
-Ifriji/isikhenkcezisi (iitreyi ze-ice cube)
-I-Oven yeToaster, kunye ne-toaster eqhelekileyo
-Iziqholo, i-oyile, ityuwa, ipepile, ukusonga kwe-saran, i-tin foil
-Iiglasi zewayini ezingenasihlahla, iiglasi zechampagne, iimbiza/iipani, iikomityi zekofu/izitya
Egumbini lokuhlala 1
Umbuki zindwendwe ngu- Chris & Jenny